Uncategorized – Rohto Myanmar
300 ကျပ်သက်သာမဲ့အခွင့်အရေး သင်သိပြီးပြီလား?
November 14, 2018 By rohto_admin In Uncategorized	No Comments
NEW V.ROHTO , V.ROHTO COOL , V.ROHTO DRYEYE ၀ယ်ယူအသုံးပြုရင်း (300)ကျပ် ပြန်လည်ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးကြီးလာပါပြီ…. ဘူးခွံတစ်ခုပြန်ပေးပြီး (300) ကျပ် Discount ရယူလိုက်ကြရအောင် promotion ကာလ = (15.11.2018 မှ 15.1.2019) အထိနော်….
Acnces Myanmar Lucky Draw
November 2, 2018 By rohto_admin In Uncategorized	No Comments
✨✨ Hello… Acnes ချစ်သူလေးတွေအတွက် ဝက်ခြံလည်းပျောက် ကားကြီးလည်းပေါက်မယ့် Lucky Draw အစီအစဉ်လေးလာပြီနော်… . ?? Lucky Draw လေးကို ဘယ်လိုကံစမ်းရမလဲဆိုရင် – Lucky Draw ကာလ November 2018 ကနေ January 2019 အတွင်း Acnes Product လေးတွေဝယ်ယူလို့ရတဲ့ဆိုင်တိုင်းမှာ Lucky Draw Cupon လေးရနိုင်ပါတယ်…. – Acnes Product လေးဝယ်လို့ရလာတဲ့ Cupon ထဲကအချက်အလက်တွေကိုသေသေချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ပေးရပါမယ်… – အချက်အလက်တွေဖြည့်ပြီးသွားတဲ့ Cupon လေးကို Acnes Facebook Myanmar Page ရဲ့ Chat Box မှာ လာပ်ို့ပေးရုံပါဘဲ… – တကယ်လို့ Facebook Page ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ရင် Lucky […]
September 13, 2018 By rohto_admin In Uncategorized	No Comments
သင့် နှုတ်ခမ်းအလှကို Rohto LipCare ဖြင့်ပုံဖော်လိုက်ပါ….. နှုတ်ခမ်းနီတစ်ချောင်းဝယ်တိုင်း 20% Discount ရယူလိုက်ပါနော်.. ၀ယ်ယူနိုင်တဲ့ကာလာကတော့ 15th to 30th September 2018 အထိ Southern & Northern BA Stand Promotion တွေမှာ ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Buy 1 Get 1 Water Bottle
Deep Heat promotion လာပါပြီ…. City Care Pharmacy ဆိုင်တိုင်းမှာ Deep Heat တစ်ဗူးဝယ်ယူရင်း လက်ဆောင်ရေဗူး ရယူလိုက်ပါ။ Promotion ကာလ >>> 26.8.2018 to 25.9.2018
V.ROHTO DRY EYE
June 23, 2018 By rohto_admin In Uncategorized	No Comments
မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ပြီးညောင်းညာနေသောမျက်စိအားပြန်လည်စိုစွတ်ချောမွေ့စေသောမျက်စဉ်းဆေး ဖြစ်ပါသည်။ မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ Tear Film ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းကြောင့်မျက်စိအပေါ်ယံအလွှာ ကိုထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ V.ROHTO DRY EYE တွင်မျက်စိအပေါ်ယံလွှာကိုအမြဲစိုစွတ်စေပြီးမျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောHydroxymethylcelluloseပါဝင်ပါသည်။ မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်းအတွက် မျက်ရည်တုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပြီးမျက်စိအားချောမွေ့စိုပြေစေသည်။မျက်ကြည်လွှာအားချောမွေ့စေသည်။ ခြောက်သွေ့နေသောမျက်ဝန်းအားစိုစွတ်စေသည်၊အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း၊မျက်ကပ်မှန်တပ်ခြင်းကြောင့်မျက်စိညောင်းညာခြင်းတို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ V.ROHTO DRY EYE ကိုမျက်ကပ်မှန် တပ်ထားစဉ်တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရေတိမ်ရှိသူများနှင့်ဆေးအတွင်းပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဓာတ်မတည့်သူများအသုံးမပြုသင့်ပါ။
Sunplay Natural Herbal
June 22, 2018 By rohto_admin In Uncategorized	No Comments
Sunplay ချစ်သူတို့ရေ ???? Sunplay ရဲ့ Product အသစ်ကို သတိထားမိကြလား??? Product အသစ်ဖြစ်တဲ့ Sunplay Natural Herbal လေးမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက??? ?? မြန်မာ့သနပ်ခါး??️??️ သနပ်ခါးရဲအစွမ်းလေးကတော့ အေးမြလန်းဆန်းမှူနှင့် အတူနေလောင်ဒဏ် ကာကွယ်ပေးပြီး ဖြူစင်ဝင်းပစေပါတယ်။ ဆာကူရာလို့ခေါ်တဲ့ ချယ်ရီပန်း?? ဆာကူရာပန်းအဆီအနှစ်ရဲ့ အစွမ်းလေးက နေရောင်ကြောင့်အသား နီမြန်းခြင်း ကိုသက်သာစေပြီး ဖြူစင်နူးညံ ချောမွတ်စေပါတယ် မြင်းခွါရွက်?? မြင်းခွါရွက်အဆီအနှစ်လေးရဲ့ အစွမ်း ကတော့ အမာရွတ် အမဲစက် နဲ့ နေလောင် ကွက် များကို သက်သာစေပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ရာသီမရွေး နေရာမရွေး နေ့စဉ် မြန်မာ့ သနပ်ခါးလိုမျိုး လိမ်းနိုင်တယ်နော်။ နောက်ပြီး ဒီ Product အသစ်လေးမှာ PA […]
May 15, 2018 By rohto_admin In Uncategorized	No Comments
Deep Heat Rub Plus ကိုထင်းရှူးနှင့် ယူကလစ်တို့မှ ထုတ်လုပ်သောအဆီကို Methyl Salicylate, l-Menthol တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ကြောင့်ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုများကို လျှင်စွာသက်သာစေပါသည်။ သင်းပျံသောရနံ့နှင့်အတူအရေပြားအတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာစိမ့်ဝင်နိုင်သောကြောင့် စေးကပ်မှုမဖြစ်စေပါ။ အ၀တ်များကိုလည်း စွန်းထင်းမှုမဖြစ်စေပါ။ Deep Heat Rub Plus သည် ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်း၊နောက်ကျောနာကျင်ခြင်း၊ ဒူး၊တံတောင်၊ ခြေကျင်းဝတ်စသည့် အဆစ်များနာကျင်ခြင်း၊ပုခုံးကြွက်သားများတောင့်တင်းခြငင်း၊ ကြွက်သားများ ညောင်းညာခြင်းများကို လျှင်မြန်စွာသက်သာစေပါသည်။ DEEP HEAT ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သောခရင်(မ်)ပုံစံဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ၃၀ ဂရမ်ပါဝင်ပါသည်။ ရောင်ရမ်းနာကျင်သောနေရာများအားသေချာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပြီးအရေပြားထဲသို့ စိမ့်ဝင်အောင် လိမ်းပြီးပါက ပူနွေးသောခံစားမှုကိုရရှိစေ၍ နာကျင်မှုကိုသက်သာစေပါသည်။
ROHTO BEAUTY & SPA
မယုံနိုင်လောက်အောင်နုပျိုပြောင်းလဲလိုသူတိုင်းအတွက် ရရှိနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုများ မျက်နှာအသားအရေတင်းရင်းနုပျိုစေရန် Nu Skin ဖြင့်ပေါင်းတင်ပေးခြင်း၊ ရေခဲဖြင့်မျက်နှာပေါင်းတင်သန့်စင်ခြင်း O.P.I ဖြင့် အာမခံဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ခြေသည်း၊လက်သည်းချေးချွတ်၊ အလှဆေးခြယ်၊ လက်သည်းတုစသည့် ၀န်ဆောင်မှုများ *အာရုံကြောများလန်းဆန်းအောင်နှိပ်နယ်ပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများHygeneအတွက် Waxing ပြုလုပ်ပေးခြင်း *ခြေထောက်ပေါင်းတင်သန့်ရှင်း၊အညောင်းအညာပြေအောင် ဆေးစိမ်ပေးခြင်း၊ *ဆံပင်ပုံသွင်း၊ ဆံပင်ဖြောင့်၊ကောက်၊ဆေးဆိုး၊ ပေါင်းတင်ပေးခြင်း၊ ဆံပင်ဆက်ခြင်းအစရှိသည့်ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးတို့ ကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။ အမှတ်(173/B) အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ Tel: 09 775566800 , 09 966565967